सबै खाले सहकारीहरुमा समानरुपमा करलगाउन माग ! – ebaglung.com
सबै खाले सहकारीहरुमा समानरुपमा करलगाउन माग !
२०७६ असार २२, आईतवार ०३:२६	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
बागलुङ, २०७६ असार २२ । बागलुङका सहकारीकर्मीहरुले सहकारी क्षेत्रमा लगाइने आयकर सबै खालका सहकारीहरुमा समान रुपमा लगाउन माग गरेका छन् । ९७ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड बागलुङले आयोजना गरेको कर सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीलाई आयकरमा समान व्यवस्था गनु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा सहकारी संघ संस्थाहरुमा कर सम्बन्धी व्यवस्था विषयमा करदाता सेवा कार्यालय बागलुङका प्रमुख हेमराज सुवेदीले सहजीकरण गरेका थिए । उनले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी भनेको बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै भएकाले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुले २० प्रतिशत नै कर तिर्नु पर्ने बताए ।
सहकारी सम्बन्धी करको व्यवस्थामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नगरपालिकामा ५ प्रशित तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा १० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।
सबै सहकारीहरुलाई समान खालको व्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिए । सहकारी क्षेत्रमा लगाइदै आएको आयकरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सबैका बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
नेफ्स्कुनका सञ्चालक चण्डीप्रसाद शर्माले सहकारी अभियानलाई सबै सहकारीमा समान भनिए पनि कानुनी रुपमा समान नदेखिएको भन्दै समान कर कायम गर्नु पर्नेमा जोड दिए । सबै सहकारीले राज्यले दिएको सेवा सुविधा पाउनुपर्छ, त्यसका लागि अभियानले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उले बताए ।
कार्यक्रम जिल्ला सहकारी संघ बागलुङका अध्यक्ष दिपक गौतमको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष अशोक गोविन्द राजभण्डारीको स्वागत र सचिव तेजेन्द्रबहादुर थापाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
विभिन्न विषयका ५० भन्दा बढी सहकारी संघ संस्थाका २ सय जना सहकारीकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी कर लगायतका विषयमा सहभागीहरुले जिज्ञासा, सुझाव राखेका थिए ।
मुसिकोटको गंगा प्राविको लागि १ लाख हस्तान्तरण : पूर्व प्रअ, चन्दादाता, जग्गादाता सम्मानित !
गुल्मीका एसईई टपर छात्रको ब्रिटिश आर्मी र छात्राको डाक्टर बन्ने सपना !
बागलुङ २०७६ मंसिर २५ । बागलुङमा विश्व मानव अधिकार दिवस र मर्यादित महिनावारीको लागि लैंगिक हिंसा दिवस एक समारोह बिच…